Samsung mandefa ny Gear Fit 2 sy ny Gear Icon X | Androidsis
Samsung dia manambara an-telefaona an-tsarimihetsika Gear Fit 2 azo ampiasaina sy Gear Icon X
Manuel Ramirez | | Fitaovana hafa
Omaly no nahalalantsika fa ny Samsung dia nanangana ny safidiny ho an'ny fandoavam-bola amin'ny finday Samsung Pay. Hetsika iray ahafahantsika mampiasa ny findaintsika handoavana vola any amin'ny orinasa ara-barotra na koa tsy mila miditra amin'ny antsipirian'ny karatra akory isika hividianana amin'ny Internet. Ny mampihomehy omaly, ankoatry ny Samsung Pay, dia izany Xiaomi koa dia nanangana ny Mi Band 2-ny, iray filokana lehibe ho toy ny haba vita amin'ny hetsika, ary izany dia mifandona amin'ny zavatra natombok'i Samsung ankehitriny ary tsy maintsy atao, ary betsaka, amin'ny akanjo entina.
Ary izany ve no ananan'i Samsung nampiditra akanjo vaovao roa Androany, ny voalohany dia ny Gear Fit faharoa antsoina hoe Gear Fit 2, raha ny faharoa kosa dia earbuds tsy misy tariby antsoina hoe Gear IconX. Filokana roa mifandraika akaiky amin'ny fampihetseham-batana na amin'ny fanatanjahan-tena ary mitodika mivantana any amin'ny sehatra iray izay misy fahombiazana lehibe raha ampitahaintsika amin'ny kely ny fivarotany karazana akanjo azo ampiasaina, fantsom-pahitana na famantaranandro marani-tsaina.
1 Samsung GearFit 2
2 Samsung Gear Icon X
Gear Fit 2 no mpandimby ny Gear Fit 1 nivoaka tamin'ny taona 2014. Miaraka ny taranaka faharoa firaketana ny fanatanjahan-tena nohatsaraina ary famolavolana mihitsy kokoa raha ampitahaintsika amin'ilay maodely tany am-boalohany.
Ny famaritana Gear Fit 2 dia a Efijery mivelatra mivelatra 1,5 mirefy Super AMOLED miaraka amina vahaolana 216 x 432, puce GPS mifangaro ary miasa noho ny CPU dual-core 1GHz, RAM 512MB, 4GB ao anaty fahatsiarovana ary bateria 200mAh. Azontsika atao koa ny miresaka momba ny fanamarinana IP68 ho fanoherana ny rano, singa iray tena ilaina amin'ny vokatra an'io karazana io.
Amin'ny ampahany amin'ireo sensor, ireo izay tompon'andraikitra amin'ny fakana ireo angon-drakitra rehetra ireo mba hahafahana mandalina tsara ny fivoarantsika amin'ny hetsika ara-batana tsara, dia afaka mahita accelerometer, gyroscope, barometre ary fanaraha-maso ny tahan'ny fo. Toy ny maodely voalohany, eto i Samsung dia manohy milalao azy amin'ny rindrambaiko manokana fantatsika ho Tizen OS ary izy no hiandraikitra ny fampifanarahana amin'ny app Health.
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny Gear Fit 2 dia mamela izany fampidirana fampandrenesana rehefa ampiarahina amin'ny smartphone. Ity akanjo azo araraotina ho an'ny fanatanjahan-tena ity dia hamely ireo fivarotana amin'ny 10 Jona ary ny vidiny amin'ny dolara dia 179,99. Hisy karazany roa ny habeny ary loko maro toy ny mainty, manga sy mavokely.
Ny orinasa koreana dia te-hiaraka amin'ny Gear Fit 2 miaraka amina telefaona tsy misy tariby. Ary tsy vitan'ny hoe mijanona amin'ny lahasa tena izy io fa mahay koa satria Manana ny mekanisma manokana anaovany fandraisam-peo hetsika ara-batana ary azo ampiasaina koa izy io hanaraha-maso ny tahan'ny fo ary hampiasana azy ho mpilalao mozika tsy miankina noho ny fahatsiarovany anatiny 4 GB.
Ny tonga lafatra rehetra hihainoana ny mozika ankafizinao, mandehana mihazakazaka ary aza manao akanjo afa-tsy spaoro. Fahombiazana lehibe amin'ny lafiny Samsung, satria rehefa mandeha mihazakazaka izy dia tsy te ho voasakantsakana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny headphone amin'ny finday avo lenta, ny bracelet amin'ny lafiny iray ...
Gear IconX manana ny accelerometer azy ary koa afaka manampy anao hahafantatra ny halaviran-dalana, ny hafainganana ary ny kaloria nohanina. Ireo data dia hasiana fampifanarahana amin'ny fampiharana Samsung Health ary manana fiasa iray hafa antsoina hoe Voice Guide izay manome valiny amin'ny feo momba ny fivoaran'ny asa ara-batana.
Headset izay mihetsika samirery izy ireo amin'ny fotoana anaovanao azy ireo ary afaka fehezin'ny fihetsika izy ireo. Azonao atao ny mitahiry azy ireo amin'ny tranga misy azy ireo izay hiampangana azy ireo avy hatrany noho ny bateria 315 mAh tafiditra ao; amin'ny Gear IconX azy manokana dia manana iray 47mAh.
Hividy izy ireo amin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona a vidiny amin'ny dolara 199.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Samsung dia manambara an-telefaona an-tsarimihetsika Gear Fit 2 azo ampiasaina sy Gear Icon X
Google Maps dia manana beta misokatra amin'ny alàlan'ny Play Store
Huawei CEO dia niresaka momba ny ho avin'i Leica sy ny findainy miaraka amin'i Daydream amin'ity taona ity